HGH Thailand ekhemisi - Isihloko nge-hormone yokukhula
ngu-HGH Thailand January 10, 2018
I-HGH (somatotropin) eThailand
I-hormone yokukhula (somatotropin) - ethandwa kakhulu kubagijimi, izici zomzimba kanye nezinye izivakashi eThailand, i-agent yezokwelapha. Esikhathini esidlule, njenge-anabolic, i-somatotropin yayisetshenziselwa ukwakha umzimba, ukwehlisa umzimba kanye nezinye ezemidlalo ezihlobene nentuthuko yama-musculature, manje abagijimi, abadlali bezemidlalo kanye nabameleli bemidlalo yezemidlalo basebenzise ngisho nangomdlandla kunomzimba womzimba.
I-Somatotropin yaba yithuluzi elihle lokukhuthazela okwandayo, okufakazelwe kahle ekunakekeleni ukulimala. Ngakho-ke, ububanzi balo muthi bukhula njalo. Ekugcineni, ngokuhlakanipha, usebenzisa lo mkhiqizo, ungandisa ukwanda komdlali osemusha, futhi lokhu kubalulekile futhi ufanelwe inkulumo ethize.
Kungani umzimba udinga ihomoni ye-somatotropi (HGH)? Soma kusho umzimba. I-Somatotropic isho ukuthatha "tropism" - ukuhlangana komzimba. Ngesikhathi sokukhula komzimba, i-somatotropin iyinhloko yokukhula okuyinhloko. Ukukhula komzimba ngokuqondile kuxhomeke ekungenikeni kwayo, kokubili ngobude nobubanzi. Uma i-somatotropin engaphezulu emzimbeni, uma umuntu ekhula ngokwengeziwe.
Ngemuva kwezindawo zokukhula emathanjeni emasipha, futhi ukukhula kwamathambo ubude, sekuyisikhathi eside kusekhona ukukhula kwamathambo. Kwezinye izingxenye zamathambo, izindawo zokukhula azikho ngaphansi kwe-ossification kulo lonke ukuphila komuntu. Izindawo ezinjalo zokukhula zikhona emhlathini ophansi, impumulo, izandla nezinyawo.
Ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi ngezizathu ezihlukahlukene ezincane, i
Ukwehliswa kwe-hormone yokukhula kwanda kakhulu. Bese ukhula ngama-giants, ngezinye izikhathi afinyelele ukuphakama okungaphezulu kuka-2 m. Lesi simo sibhekwa njengesifo futhi sabizwa ngokuthi "gigantism." Nokho, abantu abaningi emhlabeni wethu bazojabula kakhulu ngokuba yiziqhwaga, kodwa nje abantu abaphakeme. Abazali abaningi bafuna ukwandisa ukukhula kwezingane zabo, futhi manje sekuvele kungenzeka.
Ngendlela, indoda ende kunazo zonke owake waphila eMhlabeni, yayine-2 m 48 cm (!). Ngezinye izikhathi ukuvinjelwa kwe-hormone yokukhula kwanda kakhulu emzimbeni omdala, lapho iningi lezindawo zokukhula sezivaliwe. Kulesi simo, umhlathi omncane womuntu, impumulo, izandla nezinyawo zikhule kakhulu. Lesi simo sibizwa ngokuthi i-acromegaly, okusho ukuthi ukwanda kwezinhlangothi zomzimba zomzimba. Kumuntu omdala futhi owenziwe ngokugcwele, i-somatotropin yenza imisebenzi ye-anabolic.
Kungenxa yezinqubo zeprotheyini synthesis kuzo zonke izitho kanye nezicubu ngaphandle kokuhlukile. Bambalwa abantu abazi ukuthi iHGH kanye nakho konke kuyi-hormone yokucindezeleka. Ngaphansi kokucindezeleka, i-blood glucose level egazini ikhuphuka kakhulu, futhi lokhu kusiza umzimba ukuba uvumelane nesimo esibi ngokukhuphula amaprotheni synthesis, ngokuyinhloko ezakhiweni zamandla zeseli.
Ngakho-ke, abantu abanomthethosisekelo oqinile abane-skeleton enamandla ngokujwayelekile bayavunyelwa kangcono yizo zonke izinhlobo zokucindezeleka nezinkinga zokuphila kwethu. Basizwa kulokhu yi-somatotropin. Njengoba izingxenye zokukhula zomhlathi omncane, impumu, izandla nezinyawo akukaze kuvaliwe, lezi "izingxenye" ​​zikhula kuyo yonke impilo. Kodwa ngisho nasebekhulile zikhula kancane, ngokwesilinganiso yi-5-8 mm.
Kodwa-ke, kukhona, nangaphandle kwabo, umuntu ohlala eminyakeni yobudala, impumu kanye nezimbambo zifinyelela usayizi othakazelisayo, osebenza njengesihloko esiqhubekayo samahlaya azungezile. Izifundo ezinkulu eThailand ziye zabonisa ukuthi ngemva kokuqedwa kokukhula esemncane, lo muntu phakathi nokuphila okulandelayo "ukhula kancane". Kodwa lokhu kukhula kuncane kakhulu. Ngesikhathi se-60, indoda ikhula i-8-10 mm ubude nobubanzi obufanayo.
Nokho, lokhu kukhula akubonakali ngenxa yokugoba nokuncipha kwemisipha, efika kule minyaka kubantu abaningi. Ngokuntuleka kwe-hormone yokukhula ebuntwaneni, abantu bayakhula kakhulu, futhi kuthiwa bancane kakhulu. Ngolimi lwadokotela, lesi simo sibizwa ngokuthi "i-hypophysial nanism." Uma kukhona ukulahlekelwa kwe-hormone yokukhula kumuntu omdala wokukhula okuvamile, izinhlobo ezihlukahlukene zokudaya umzimba zikhula, okuyinto ngezinye izikhathi ngisho nokuphela kokufa, kodwa zingavamile kakhulu. Ngokwalo, igama elithi "hypophysial nanism" lisho kakade ukuthi i-somatotropin ikhiqizwa emgodini we-pituitary.
Iyini i-pituitary gland manje eyazi konke noma cishe konke. I-pituitary gland iyinhlangano engezansi ye-cerebral appendage, i-outgrowth engxenyeni yobuchopho. Ukuma nobukhulu be-pituitary gland kufana ne-cherry. I-pituitary gland ivikelwe kahle emandleni ekungcupheni kwayo.
Itholakala enecala eliqinile lamathambo - "isihlalo saseTurkey" esisekelweni skull. Amanye ama-hormone we-pituitary akhiqizwa - i-hormone ye-thyroid-eshukumisayo (ethinta i-gland ye-gland), i-adreno corticotropic (ivuselela izigulane ezinama-adrenal), i-gonadotropic (ivuselela izilonda zobulili) nezinye.
Umsebenzi we-pituitary ulawulwa yi-hypothalamus, indawo ekhethekile ye-midbrain. Lapho, ama-liberin nama-statins asethuthukiswa. Ukuze i-hormone ye-somatotropic, i-somatoliberin ne-somatostatin zibalulekile. I-Somatoliberin hypothalamus ikwandisa i-hormone yokuvikela i-hormone eyimfihlo nge-pituitary gland. I-Somatostatin, ngokuphambene nalokho, ivimbela ukukhiqizwa kwe-somatotropin. Uma sifuna ukwandisa inani le-hormone yokukhula emzimbeni, kuyadingeka ukuthi ukwandise inani le-somatoliberin, noma ukunciphisa inani le-somatostatin.
Sekuyisikhathi eside bekukholelwa ukuthi i-hormone yokukhula ikwazi ukwenza ngokwayo izicubu zomzimba, izicubu kanye nezitho zangaphakathi. Kamuva kwaba ukuthi lokhu akunjalo. I-HGH iyakwazi ukuphazamisa amaseli kuphela ku-vitro ekugxilweni kwezikhathi ze-2,000 eziphakeme kunokwenyama. Emzimbeni ovamile, i- HGH yenza kuphela esibindi.
Isibindi sikhiqiza i-insulin-like factor factor, ebizwa nangokuthi somatomedin. I-Somatomedin - nayo ine-anabolic kanye nomphumela wokukhula, okuthinta ama-cell target. Njengomtholampilo, ngivame ukubona amacala lapho ngemuva kwesifo esinamandla sesibindi ingane iyeka ukukhula futhi isimo esifanayo ne-pituitary nanism senzeke, nakuba lesi sifo sibangelwa ukungabikho kwe-somatomedine.
Ngakolunye uhlangothi, i-acromegaly ivame ngamazinga avamile wegazi glucose egazini. Lesi sifo kulokhu kubangelwa izinga elidlulele le-somatomedine egazini. Ngokuvamile, uketshezi lokulawulwa kwe-anabolism ne-hormone yama-somatotropic esetshenziselwa imisipha yamathambo kanje:
Uma sifuna ukuba nomphumela we-anabolic, zithi, kumaseli omzimba, khona-ke singakwazi:
I-1. Ukwandisa inani le-somatoliberin ku-hypothalamus.
I-2. Nciphisa inani le-somatostatin.
I-3. Ngena emzimbeni we-STG.
I-4. Ngenisa emzimbeni somatomedin.
Kuzo zonke izimo, imiphumela yokugcina izofezwa. Futhi ungaya kokubili endleleni yokufaka isici esidingekayo kusuka ngaphandle, futhi eduze nendlela yokukhuthaza ukukhiqizwa kwayo yizinto eziphilayo ngokwazo. Ungakwazi ukuqhubeka endleleni yokukhulisa
ukuzwela kwamaseli kuya ezakhiweni ezidingekayo, kodwa le ngxoxo isisazofika. Ake sibheke ngokucophelela kulo lonke uhlangothi lwemiso-mpilo ye-somatotropin
futhi uqale lokhu ukwelashwa nge-somatotropin.Ngemva kwakho konke, esimweni somlando, konke kwaqala ngawo. I-STG i-hormone ye-peptide. Iqukethe i-amino acid eline-long chain eyanele ngokwanele i-191 amino acid resisi. Ngesikhathi i-1921, izazi ze-physiologist ekuhlolweni kwezilwane zavutha i-gigantism yokuhlola lapho zifaka ukukhishwa okungekho emthethweni kwe-lobe yangaphakathi yezingulube ze-bovine pituitary. Njengoba singabona, kungenzeka ukuthi ukwandisa ukukhula komzimba omncane sekuye kwabonakala isikhathi eside.
I-somatotropin ehlanzekile yemvelaphi yezilwane yayiqale yodwa ku-1944, i-uman - ku-1956. Ngisho ngaleso sikhathi, ngosizo lwe-STH, abancane abanemiiphumela emihle baqala ukuphathwa ngekhono nangokwesisekelo. Ngokulandelayo, kwatholakala ukuthi kunezihlobo ezintathu ze-STH ezinesisindo esithile semisipha. Kubantu, i-STH ikhiqizwa emaqenjini okuthiwa i-eosinophilic we-pituitary gland.
Ezingxenyeni zamangqamuzana eosinophilic, njengombuso, lezo zimo ze-gigantism zithuthuka lapho ukukhula komuntu kunkulu kuno-2 m. Kulesi sigaba sokuthuthukiswa kwemithi, lezo zicubu ziphathwa ngokuphumelelayo kokubili ngokwempilo nangendlela efanele. Ukukhula okuphakeme, noma kunjalo, kuhlala. Phakathi kwabadlali bebhola basketball emhlabeni wonke, kunabantu abaningi abahlinzekwa ngamathambo eminyakeni yabo emncane.
I-tumor isuswe ekhaleni (!), Futhi umuntu uhlala, njengokungathi akukho okwenzekile. Nokho, kukhona amacala angasebenzi. Ngakolunye uhlangothi, inani labadlali "abakhulayo" elikhulayo likhula, okuyinto esemncane ejojowe nge-hormone yokukhula yokwandisa ukukhula.
Ukuvinjelwa kwe-hormone yokukhula egazini kukhishwa. Phakathi nosuku kukhona, njengokubusa, izintaba ezinkulu ze-6-9. Inombolo yeziqongo ezinjalo ngezinye izikhathi ifinyelela ku-12. Ukuphakama kweziqongo kuyanda ngokusebenza ngokomzimba nangesikhathi sokulala. Ekudleni, ukuphakama kwezingqimba zokukhululwa kwe-somatotropin, ngokuphambene nalokho, kunciphisa, ikakhulukazi uma lokhu kudla i-carbohydrate.
I-STG yazo zonke izidalwa ezincelisayo zikhona nucleus efanayo ephilayo esebenzayo. Izinhlobo zezilwane eziphansi ze-Phylogenetic zisabela kumaGHG aphakeme, kodwa i-STG yezinhlobo eziphansi azenzi ngezinhlobo eziphakeme. I-STG yabantu, isibonelo, isebenza kuzo zonke izinhlobo zezilwane, kodwa ayikho enye yezilwane ze-somatotropin umuntu ngamunye owenzayo.
I-STG izinkabi zizosebenza ngezinhlobo zezilwane ezithuthukile kakhulu, kodwa hhayi kubantu. I-STG ye-whale izophinde isetshenziswe ezilwaneni zenhlangano ephansi, kodwa hhayi kuphela kumuntu noma kumonkey, njll.